Madaxweynaha Galmudug oo kulan muhiim ah la qaatay siyaasiyiin iyo aqoonyahano | XORRIYA NEWS
Home Wararka Madaxweynaha Galmudug oo kulan muhiim ah la qaatay siyaasiyiin iyo aqoonyahano
Madaxweynaha Galmudug oo kulan muhiim ah la qaatay siyaasiyiin iyo aqoonyahano
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa maanta kulan online ah la qaatay siyaasiyiin, diblomaasiyiin iyo aqoonyahanno kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa.
Madaxweynaha oo ay u buuxsantay 100 maalmood tan iyo markii la doortay, ayaa ka warbixiyay waxa uga qabsoomay dib u heshiinta iyo qorshayaashiisa ku aaddan isu soo dhoweynta siyaasiyiinta iyo bulshada Galmudug.
Kulanka oo uu soo qabanqaabiyay Machadk RAAS, ayaa waxaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa Agaasimaha Machadka, Dr. Cabdillaahi Xaashi Abiib, Madaxweynihii hore ee Galmudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed, Danjire Yusuf – Garaad, Xeer ilaaliyihii hore, iyo Dayib Shiikh Axmed oo ah diblomaasi, horena uga soo shaqeeyay nabadeynta Gobolka.
Kulanka waxaa daaddihinayay weriyaha caanka ah, Maxamed Axmed Xaaji (Cag-ma-dhige) oo jooga London.
Yusuf Garaad oo aan la xiriiray wuxuu ii sheegay in uu ahaa kulan u dhacay si deggan, ka qeyb galayaashuna ay heleen fursad fiican oo ay su’aalo soo jeediyaan Madaxweynuhuna uu uga jawaabay, iyadoo qaar kalena ay soo jeediyeen talooyin wax ku ool ah.
Sidoo kale Yusuf Garaad waxaa uu si gaar ah ugu mahadceliyay Machadka Raas, Agaasimihiisa Dr. Abiib iyo dhammaan howlwadeennada RAAS, wuxuuna ku bogaadiyay barnaamijyadooda ku wajahan nabadeynta iyo dib u dhiska dalka.